Peter Erikssom: Waa siyaasad is daldalaad ah - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Peter Eriksson (MP) Sawirle: Fredrik Persson/TT
Peter Erikssom: Waa siyaasad is daldalaad ah
La daabacay måndag 25 april 2016 kl 16.30
Hogaamiyihii hore ee xisbiga Doogga (MP) Peter Eriksson ayaa dhaleeceeyn ballaaran u soo jeediyay sida uu hogaanka xibigu u maareeyay dhacdooyinkii toddobaadkii ina dhaafay la soo gudboonaadey xisbiga.
Eriksson ayaa sheegay in xisbigu u baahan yahay tallaabooyin adadag oo haddii kale e ka iman karaan khatarro halis ah.
– Dhabbada illaa iminka la qaadey waa qoor-iska jar siyaasadeed, sida uu sheegay Eriksson mar uu u warramayay laanta wararka ee Ekot.
Shaqa ka fariisigii wasiirka guriyeeynta Mehmet Kaplan, ereyadii islaamiisteyaasha iyo guul-darradii xisbiga ka raacday su’aashii la xiriirtay iibinta shirkadda tamarta ee Vattenfall. Xisbiga Doogga (Miljöpartiet) ayaa ku sugan caqabaddiisii siyaasadeed ee ugu liidatay intii uu xisbigu jiray.
Labada hoggaamiye ee xisbiga Gustav Fridolin iyo Åsa Romson ayaa maanta faallo ka bixiyey, sheegeyna in haddii loo baahdo ey isaga deggeyaan kuraasta kulanka xisbiga uga dhici doona magaalada Karlstad muddo ey saddex toddobaad iminka dhiman yihiin. om tre veckor.
Dhaleeceeymo ballaaran ayaa dusha looga tuurey labada hoggaamiye ee xisbiga, iyadoona uu maanta ku soo darsoomay hoggaamiyihii ka horreeyay Peter Eriksson.
– Waxay ila tahay in loo baahaan yahay is-bedello, bilow cusub ayaa loo baahan yahay, si dib laysugu abaabulo howlo adagna loo qabto muddada ka dhiman doorashada, sida uu sheegay.
Yaa kula tartami kara jagada laba hoggoomiye ee dooneya iney sii joogaan?
– Ma garan karo. Hase yeeshee waxay ila tahay inay suurtagal tahay. Waxaa xisbiga dhexdiisa ka jira dhaleeceeymo, waana mid loo baahan yahay in ururka doorashadu eegis ku sameeyo cidda sameeyn kari lahayd. Waa howlaha loo xil-saarey guddiga doorashada ee maahan howlo aniga ii yaala.
Halis intee le’eg ayay leedahay caqabadani?
– Waxaan aamin-sanahay inay tahay caqabad halis ah. Waxay wax u dhintay aaminaaddii loo hayey xisbiga guud ahaan iyo hoggaamiyeyaasha xisbiga.
Horay ayaa loo shaaciyey in xoghayaha xisbiga Miljöpartiet Anders Wallner aannu jagada isku soo sharrixi doonin kolka la gaaro kulanka uu xisbigu yeelan doono bisha maajo.
– Waxaan qabaa inay wanaag-san tahay in xoghayaha xisbigu aanu soo noqon doonin, sida uu sheegay Peter Eriksson.
Löfven: "Mushkiladooyinka MP dawlada ayey saameeysay"
Hogaamiyaha MP oo diyaar u ah in la doorto hogaamiye cusub
Yasri Khan (MP) oo isaga haray siyaasadda